Vaovao - Ny fizotry ny famokarana orinasa
Ny fizotry ny famokarana ny orinasanay
Ny famokarana Pulp bobongolo ankapobeny dia misy fanomanana pulp, famolavolana, fanamainana, fanerena mafana ary fomba hafa.
1. Fanomanana pulp
Ny pulping dia misy ny dingana telo amin'ny dredging, ny pulping ary ny pulping. Voalohany, ny fibre voalohany dia dredged ao amin'ny pulp aorian'ny fisavana sy fanasokajiana. Avy eo nokapohina ny pulp, ary nosarahan'ny pulp ny fibre hanatsarana ny hery mifamatotra eo anelanelan'ny vokatra vita amin'ny pulp. Satria samy hafa ny haben'ny refy, ny hamafiny sy ny lokony, amin'ny ankapobeny dia mila manampy ny tanjaka fananana lena, ny haben'ny habeny ary ny zavatra simika hafa, ary manitsy ny haben'ny fifantohana sy ny lanjan'ny pH.
Amin'izao fotoana izao, ny dingan'ny famolavolana pulpantsika dia ny fomba fananganana banga. Ny fananganana vacuum dia dingana iray izay alentika ao anaty dobo slurry ny maty ambany ary ny fibres ao amin'ny pisinina slurry dia tototry ny tsindry mitovy amin'ny etona ary mihidy ny maty ambony. Izahay dia manana milina famolavolana fiakarana mamaly, mety kokoa amin'ny famokarana takiana habe sy famaritana lehibe, fitakiana avo lenta amin'ny vokatra vita amin'ny taratasy sy plastika.
Ny vokatra fanerena maina dia mila maina, amin'ny ankapobeny mampiasa fanamainana làlana fanamainana sy fanamainana horonantsary. Ny orinasanay dia mampiasa ny làlana fanamainana ho an'ny fanamainana. Ny votoatin'ny embryon mando pulp vita amin'ny pulp dia mety hahatratra 50% ~ 75%, aorian'ny firotsahana ny bobongolo ambany ary atambatra amin'ny bobongolo ambony, ary avy eo azo ahena ho 10% ~ 12% aorian'ny fanamainana. Ireo vokatra tsindry lena matetika tsy mila maina.
4. Fanindriana mafana
Rehefa vita ny famolavolana ny pulp, dia atosika amin'ny hafanana ambony sy ny tsindry mafy mba hahatonga ny vokatra famolavola pulp ho compact, toetra mekanika tsara kokoa, ary hanao ny endrika sy haben'ny maripanan'ny vokatra, fanamiana ny hatevin'ny rindrina, malefaka sy fisaka. ivelany ivelany. Ny fizotry ny famolavolana amin'ny ankapobeny dia mampiasa bobongolo maripana avo (amin'ny ankapobeny 180 ~ 250 ℃) sy pulp amin'ny tsindry avo mba hanafoanana ny famolavolana pulp aorian'ny fanamainana, ary ny fotoana fanerena mafana dia 30-60 matetika.
5. Famintinana sy famaranana
Aorian'ny faran'ny fanerena mafana dia hokapaina ny vokatra hahazoana ny vokatra vita. Aorian'ny fandefasana entana, vokatra vitsivitsy no hovolavolaina amin'ny fanodinana aorian'ny fangatahan'ny mpanjifa, toy ny pirinty amin'ny pad, grooving sns.
6. Fanaraha-maso sy fonosana
Aorian'ny fahavitan'ny dingana famokarana sy fanodinana rehetra, manana mpiasa fanaraha-maso kalitao matianina izahay handinihana ireo vokatra, arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa, hanafoana ireo vokatra tsy mendrika.
Pulp Cup Holder, Fako Pulp voaoloko, Box Mf kosmetika, Fandokoana fonosana fonosana fandokoana, Boaty fonosana sakafo, Fonosana sakafo boaty baoritra,